एमसीसी पारितका लागि देउवासंग ओलीको शर्त: दुईवटै प्रदेशमा एमाले सरकार निरन्तरता, माधब नेपालको पार्टी खारेज गर्न सहयोग ! – GALAXY
एमसीसी पारितका लागि देउवासंग ओलीको शर्त: दुईवटै प्रदेशमा एमाले सरकार निरन्तरता, माधब नेपालको पार्टी खारेज गर्न सहयोग !
काठमाडौं । एमसीसी पारितका लागि देउवासंग ओलीको शर्त स् दुइटा प्रदेश सरकार एमालेकै सरकार टिकाउँने, नेकपा (एस) खारेजीमा सहयोग १ दुईवटै प्रदेशमा एमाले सरकार निरन्तरता
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ओलीले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पास गराउनका लागि राजनीतिक बार्गेनिङ सुरु गरेको खुलासा भएको छ । अध्यक्ष ओलीले एमसीसीको मुद्धाले सरकारी गठबन्धनमा असमझदारी बढेपछि राजनीतिक बार्गेनिङ सुरु गरेका हुन ।